Isibalo sabantu baseNingizimu Korea - umthwalo noma njengento edingekayo?
Okwamanje, abantu-South Korea, ogama labantu wafinyelela ngaphezu kokuvamile, edonsa abaningi emhlabeni ukunakwa sibonga kwentuthuko ehlukahlukene kanye nobuchwepheshe.
Izazi-mlando zikholelwa ukuthi kubantu bakuleli - inzalo izizwe zasendulo ababevela Mongolia ku Bronze Age. Kusukela ekuqaleni kwenkathi yethu, izakhamuzi zaseNingizimu Korea, inani labantu lonke nhlonhlo Korean angabhekwa njengeqembu yobuhlanga olulodwa.
bakhona kubhekwe abasha kuze kube ekuqaleni XX leminyaka. Izinga lokuzalwa belilokhu liphakeme kakhulu, ngoba (ngokuvamile iDemo) ukuphila kwabo obelethayo izikhathi 10. Nokho, cishe ingxenye eyodwa kwezintathu kulezi izingane zifa engakafiki ngonyaka. Inani elifanayo bafa ngaphambi kweminyaka eli-10. Leli qiniso akusona isimanga, kwakukhona isimo esifanayo emazweni amaningi.
Isilinganiso owesilisa ukuphila kwabantu sasiyiminyaka engaba ngu-24 ubudala. Abesifazane baye bahlala isikhashana - engu-26. Manje, lezi zinombolo zibonakala angathandeki kodwa ngaleso sikhathi kwaba ngempela isimo ezivamile. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi, naphezu okusezingeni eliphezulu lokuzalwa isilinganiso, nenani labantu lalanda kancane kakhulu.
Isimo lithuthukile kakhulu kuphela sebukholoni. imithi European, imithi, indlela entsha impilo banikezwe ithuba lokuwina iningi izifo, abathi izimpilo zabantu baseNingizimu baseKorea. Labantu kule nkathi baphila isikhathi eside ngokuphawulekayo: kufika eminyakeni engu-43 namaxhegu ngasinda futhi 44 - abesifazane.
Kancane kancane, ngosizo ngcono isimo kuleli zwe, sokuphila baseKorea liye landa eminyakeni engaba ngu-75-80. Nokho, lolu shintsho kuye kwaholela yini namuhla bakulelo zwe ingadlali. Isilinganiso umndeni-Korean has 1-2 izingane. Nakuba abesifazane abaningi ayisebenzanga, bengafuni ukukhulisa eziningi izingane. Lokhu kungenxa yezizathu zezomnotho. Ngaphambili, inani elikhulu izingane okuqinisekisiwe yobudala evikelekile ubudala, kodwa manje, kunalokho, izingane ezingaphezu, kulapho kubiza abazali. imfundo asezingeni eliphezulu ebiza kakhulu, abadala abasebenza nezwe, izingane ziqala ngempela emva kwesikhathi. Ngaphezu kwalokho, lezi zinsuku baseKorea izindlela okuningi ukuhlinzekela sebekhulile, futhi ukuzalwa kwezingane akuyona ngokuhle kunakho konke kwawo.
Inani labantu base-Ningizimu ne-North Korea - omunye isizwe. Bonke laba bantu abakhuluma ulimi olufana nolwabo. Nokho, kukhona izakhamuzi abakhuluma ezilimini-Korean. Abantu abaningi basebenzisa izincwadi ngolimi isiKorea, eyayisekelwe ku Seoul lwesigodi. Nakuba izwe akuyona kahle -developed ukufunda isiNgisi, iningi amalebuli izimpawu ebhaliwe izilimi ezimbili. Uhlobo baseKorea Kulula ukubona kakhulu: ba kulula kakhulu ukuhlukanisa kusuka kwamanye ahlobene Asian, Chinese noma Japanese.
Leli qembu yobuhlanga idume kwamasiko, umoya walo onamandla kazwelonke nokuzinikela ngenxa yezwe. Ngokokulandisa, ngaphakathi fana khaya ngaphakathi umndeni ukuze izizukulwane eziningana. Kodwa, muva nje, inani elandayo labantu base imikhaya isuka kwezinkambiso ezamukelekayo izimpilo iqembu zabo emphakathini.
Okuvame kakhulu igama lomndeni eKorea - UKim. South Korean nge igama ezingaphezu kuka 21% wezindleko. Indawo yesibili kuhlala Lee namesakes, kanti eyesithathu - Pak.
Izwe inenqubomgomo inkululeko engokwenkolo. Ngesikhathi esifanayo lo athembekile azo zonke izinkolo kuleli zwe manje kancane kuka 51%. Kulawa, cishe isigamu - Buddhist, mayelana 34% - amaProthestani, kancane ngaphezu kuka 10% - lamaKatolika. Abanye abathi shamanizm futhi konfutsianstvo.
Naphezu kweqiniso lokuthi wonkana yezwe - le-Korean uhlanga, ke ngokugcwele noma okwesikhashana ekhaya ukuze inani elikhulu labantu abavela kwamanye amazwe.
Ngokusho ukubalwa kwabantu ka-Okthoba ngonyaka odlule, nenani labantu baseNingizimu Korea safinyelela kubantu abayizigidi ezingu-50. Ngenombolo enjalo yezwe lifaka 24 e isibalo sabantu. Banikezwe namanje kanye labantu Republic of Korea, isiKorea nhlonhlo has abantu abangaba yizigidi ezingu-73. Futhi yile indawo 18 th phakathi wonke amazwe emhlabeni.
Abathandwayo kwakuwukuthi abesifazane kuleli zwe nge-ayizinkulungwane 110 ezingaphezu kuka abesifazane.
I kwabantu sabantu South Korea abantu 501,37. square kilometre. Okusho ukuthi, uma ubeka bonke abantu ezweni eduze komunye nomunye, ku isiza i-ikhilomitha ikhilomitha ngalinye kungaba kuwufanele abantu 501. Ukwanda kwabantu kuyinto th 12 emhlabeni.
Ososayensi baqhuba izifundo ezihlukahlukene, kuhlanganise kwenani labantu ku-akhawunti bese benza izibikezelo isizwe. Ngokusho la idatha, e 2750 inganyamalala ngokuphelele abantu-South Korea. Population, isilinganiso kabani ukukhula 0,27%, ngeke kube khona isikhathi eside.
Ochwepheshe ukukhumbuza ukuthi ngo-2014 inani labantu laliphakathi abantu abangaphezu kwezigidi ezingu-50. Ngesikhathi esifanayo izinga lokuzalwa izingane 1.19 nje owesifazane ngamunye. Uma isimo akusho bazoshintsha, kwase kuba nge-2136 inani labantu kuzoncishiswa 10 million. Futhi ngo-2750 i-baseKorea uzobhekana yokuqothulwa.
Emuva ngo-2006, usosayensi Oxford waxwayisa okusongelayo isiphetho ekubeni yizwe lokuqala ogama labantu buzophela ngendlela yemvelo ngezinga enza ngalo manje zokwenyuka kwenani labantu baseNingizimu Korea.
Inkampani "uMholi" (FGC): ukubuyekezwa, izincazelo kanye nezinsizakalo. ikota Skolkovo ka FGC "uMholi": Izibuyekezo
Imililo e Tyumen futhi yaseTyumen
Izibonelo qhuba kangcono umsebenzi. Kuhle qhuba ngaphandle lomsebenzi: izibonelo